Ị nwere ike site ugbu a ghọtara na ị na-adịghị anya na-eji egweri biini na gị na desktọọpụ. Ọzọkwa, ndị na egweri biini nchekwa bụ naanị ijupụta desktọpụ gị ohere ma ọ bụ na ị chọrọ a dị ọcha desktọọpụ Ya mere, ọ ga-adị mma wepụ ya. Ndị ọzọ ihe mere mbiba zoo akara ngosi bụ na ị na-adịghị amasị akara ngosi. Nsogbu ahụ na-ihichapụ ya aka gaghị arụ ọrụ na ị nwere ike ime ka nsogbu ndị ọzọ. Ị nwere ike na-agba ọsọ ihe ize ndụ nke iwepụ ihe egweri biini eme ka mgbake nke gị dị mkpa faịlụ siri ike. Ebe a na-mfe nzọụkwụ na-eduzi na-esi zoo ya si na desktọpụ gị enweghị ihe ọ bụla hassle.
Gaa na desktọpụ gị na ihuenyo na nri click. Wee pịa na hazie nhọrọ
Ka na desktọọpụ n'akụkụ aka nri, pịa mgbanwe oyiyi
Ị ga-ahụ a ntọala window gbapụta dị ka nke a.
Pịa na OK nhọrọ zoo na ị na egweri biini icon
Ị ga-ahụ egweri biini a na-ewepụ site gị na desktọọpụ.
The ala akara bụ na iwepu egweri biini si na desktọpụ gị bụ a dị mfe ọrụ ozugbo ị na-eso ụzọ na usoro. The ọma ihe bụ na ị nwere ike iweghachi ya azụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị icon ị nwekwara ike ịgbanwe ya ka gị họọrọ nhọrọ
Olee otú Gosi na egweri biini na gị na desktọọpụ
N'oge nhicha nke gị na desktọọpụ iji mepụta ohere, i nwere ike na mmadụ na mberede wepụrụ gị egweri biini. Ọ dịghị mkpa na masịrị; na akara ngosi nwere ike ka na-eweghachi. Ọ dịghị mkpa, ihe ụdị kọmputa ị na-eji, e nwere ihe ngwọta maka nke ahụ. Ebe a bụ ndị dị mfe iji agbake egweri biini azụ na gị na desktọọpụ
Gaa Malite menu na pịa na ọrụ mmanya
A Control Panel na-egosi na nri gị, pịa ya
Wee pịa na Ọdịdị na Personalizatio n nhọrọ
Site n'ebe ahụ, pịa Personalization
Mgbe ahụ gaa n'aka ekpe nke window, nke dị n'okpuru ọrụ udi. Pịa na họrọ egweri biini nke gị nhọrọ. Ị nwere ike ịtụtụrụ ihe efu otu ma ọ bụ a zuru otu-na mbụ ehichapụ egweri biini. Ebe a, ị nanị họrọ gị họọrọ egweri biini, mgbe ahụ, pịa weghachi na n'ikpeazụ OK.
I nwekwara ike ịgbanwe Njirimara nke egweri biini gụnyere na-ejedebeghị na ya size ịzọpụta gị ohere.
Olee otú Naghachi Lost Data si egweri biini Iji Wondershare Data Recovery
Mgbe ị na mmadụ na mberede ihichapụ data na kọmputa gị, na egweri biini echekwa ya nwa oge ruo mgbe ị efu ya. N'ihi ya, ị ga-esi a ohere iweghachi gị faịlụ ma ọ bụ data ha na mbụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ irè Software na ezi mgbake àgwà, lee ọzọ. Wondershare Data Recovery Bụ ihe kasị mma data mgbake software na ngwa ngwa scanning ọsọ, na-akwado iche iche nke faịlụ na miri scanning. Nke a software bụ a cross n'elu ikpo okwu na bụ dakọtara na Mac na Windows arụ ọrụ usoro. Ị nwere ike ma ịzụta ma ọ bụ na-aga n'ihi free ikpe version. Wondershare Data Iweghachite nwere ịrịba atụmatụ, nke gbagwojuru ndị ọzọ data mgbake software. Ọ nwere atọ mgbake ụzọ na bụ raw mgbake, furu efu faịlụ mgbake na nkebi mgbake. Ọ na-nwere dị iche iche formats nke data, nke na-ekpuchi ọtụtụ ndị faịlụ na ụdị dị ka photos, akwụkwọ, videos, ozi ịntanetị na-edebe ihe ochie na kọmputa gị. A dị oke egwu software nwekwara ike naghachi furu efu data si flash draịva, ike draịva, ebe nchekwa kaadị na ndị ọzọ na mbughari draịva, dijitalụ igwefoto na cell igwe
Data mgbake Usoro iji Wondershare Data Recovery
N'okpuru ebe a bụ mkpa nzọụkwụ-enyere gị aka naghachi gị furu efu data iji Wondershare Data Recovery software.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake faịlụ ụdị
Mbụ, ị na-chọrọ họrọ faịlụ ụdị ị na-aga na-enweta azụ gị videos, audios, foto na email. Ị nwekwara ike tụlee recoving niile furu efu faịlụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị dị gị mkpa. Dị nnọọ ka elu uche gị na ihe ị chọrọ na software naghachi tupu ya etinyewe ka nzọụkwụ ọzọ.
Iji naghachi gị furu efu faịlụ site na egweri biini, họrọ egweri biini aka mgbake ngwá ọrụ ike iṅomi site niile faịlụ na egweri biini.
Nzọụkwụ 3 na-agbake ehichapụ faịlụ site egweri biini
Mgbe software completes scanning site na egweri biini, ị nwere ike ugbu a ịhụchalụ Doppler N'ihi. The natara faịlụ na-etinye na dị iche iche edemede aka iru ala na indentification. Na-aga site niile faịlụ na ị chọrọ ha natara, akara ha wee pịa naghachi. Mgbe a mgbe ị ga-enweta niile furu efu faịlụ na ị chọrọ ka ha na-Ewepụtara.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ gị chọrọ data, mepụta a miri emi iṅomi. Wondershare Data Recovery Bụ ihe kasị mma data mgbake m maara. Nye ya a ogbugba taa ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachite dị mkpa faịlụ. Ọ bụghị uru ọ na-echegbu onwe gị furu efu faịlụ ekwe ka software na-ngwọta.
> Resource> Naghachi> Olee Zoo na egweri biini Icon si gị Desktọpụ